WARBIXIN: Waa kuwee 5 Daafac ee illaa iyo haatan ugu fiican Euro 2016? – Gool FM
WARBIXIN: Waa kuwee 5 Daafac ee illaa iyo haatan ugu fiican Euro 2016?
Haaruun July 1, 2016
(Paris) 01 Luuliyo 2016 – Wargeyska L’Equipe ee ka soo baxa Faransiiska ayaa soo bandhigay shanta Daafac ee illaa iyo haatan ugu fiican Cayaaraha Qarammada Yurub Euro 2016 ee ka soconaya waddanka Faransiiska.
1-Giorgio Chiellini (Italy)
Tababaraha Talyaaniga Antonio Conte waxa uusan ciyaarsiin hal kulan Euro, kaasoo ahaa ciyaartii Talyaanigu la dheelay Ireland oo 1-0 looga adkaaday Italy.
Chiellini waxa uu ka mid yahay Daafacyada xilligan ugu fiican Caalamka, waxa uu kaalin muuqata ka qaatay 5-tii Horyaal ee ugu dambeysay oo ay kooxdiisa Juventus ku guuleysatay.
Ciyaaryahan Boateng waxa uu door muhiim ah ku leeyahay xulka Jarmalka, waxa uu nidaamiyaa Daafacyada dambe, waa ciyaaryahan dheereeya oo aan kubaddana si sahal ah looga helin.
Inkastoo uu soo qaatay xilli ciyaareed dhaawacyo u badnaa, haddana waxa uu garoommada ku soo laabtay xilligii loo baahnaa, waana xiddig ay u dhameystiran yihiin shuruudihii Daafac hagaagsan looga baahnaa.
Talyaanigu waa mid ka mid ah xulalka ciyaar wanaagsan soo bandhigay Koobkan Euro 2016, taasoo mahadeeda ay leeyihiin ragga Daafaca uga ciyaara oo goolhayuhu ku jiro kuwaasoo 4 ka mid ah ay u wada ciyaaraan Juventus (Buffon, Barzagli, Chiellini iyo Bonucci), waxaana Bonucci oo 29 sano jir ah uu wacdaro ka dhigay kulankii Belgium.
Isagoo ka faa’iideysanaya maqnaanshaha Raphael Varane ayuu Koscielny noqday hoggaamiyaha daafacyada Faransiiska; waxaana lagu tiriyaa Daafacyada Dhexe ee ugu wanaagsan cayaaraha Euro 2016.
Waa 30 jir khibrad leh oo ka ciyaara Daafaca (60 kulan, 2 gool), waxa uu u ciyaaraa kooxda Krasnodar ee dalka Ruushka.
Kulankii Iceland ay 2-1 dirtay Ingiriiska waxa uu Ragnar ahaa mid ka dhex muuqday.
Waa Daafac bir ah, kalsooni weynna qaba, kuna fiican Kubbadaha sare ee Madaxa.
RASMI: Kooxda Liverpool oo shaacisay lambarka uu u xiran doono daafaceeda Joel Matip
Manchester City oo xaqiijisay inuu ka tagayo Martin Demichelis